विपतको बेला प्रचार मोह, मन्त्रीको फोटो टाँसेर सिलिण्डर बाँडियो ! – Action Media
यो पनि पढ्नुहोसखोइ चिनियाँ सिलिन्डर ? सांसदले लगे !व्यक्तिगत खर्च गरेर जुटाए पनि विपतको बेला राहत तथा सहयोग सामग्रीलाई यसरी प्रचारको रुपमा प्रयोग गर्न नपाइने जानकारहरु बताउँछन् । भारतको उदाहरण हेर्ने हो भने त्यसरी प्रचार गरेमा अपराध गरेसरह कारबाही गर्ने आदेश अदालतबाट भएको छ ।
अक्‍सिजन सिलिण्डर मन्त्री आले
Prevसगरमाथामा आकाशिएको आनन्द (फोटो फिचर)
Nextनिश्चलको गुनासो–‘विग्रेको व्यवस्थाको शिकार हामी पनि कहिले हुन्छौं भन्ने डर लाग्छ’